Tusaha Ganacsiga Iibka iyo Ijaarka dul Realtyww Info
Adeegyada Naqshadeynta gudaha Mohali
Adeegyada Naqshadeynta gudaha Punjab
Qandaraasleyda Hormarinta Guryaha gudaha Evanston
Qandaraasleyda Hormarinta Guryaha gudaha Illinois
Adeegyada Naqshadeynta gudaha Ahmedabad
Adeegyada Naqshadeynta gudaha Gujarat
Qandaraasleyda Hormarinta Guryaha gudaha Melbourne
Waxa daabacay Technocrats Horizons
arag Adeegyada Naqshadeynta la daabacay 1 week ago
Waxa daabacay Improve Net
arag Qandaraasleyda Hormarinta Guryaha la daabacay 1 week ago
Waxa daabacay Sidharth
arag Adeegyada Naqshadeynta la daabacay 2 weeks ago
Waxa daabacay Bassam Issa
arag Tusaha Ganacsiga la daabacay 2 weeks ago
Waxa daabacay Jimmy McClearan
arag Shirkadaha Dhismaha la daabacay 3 weeks ago
arag Shirkadaha Guurista la daabacay 1 month ago
Waxa daabacay Taylor and Sons
arag Qandaraasleyda Hormarinta Guryaha la daabacay 1 month ago
Waxa daabacay Joseph Smith
Waxa daabacay r0ckyourworld
Tilmaamaha ganacsiga waa degel ama liistada macluumaadka daabacan oo ku liis gareeya dhammaan ganacsiyada ku jira qayb ka mid ah. Ganacsiyada waxaa lagu qeexi karaa meheradda, goobta, waxqabadka, ama cabirka. Meheradda ayaa lagu soo ururin karaa iyada oo la adeegsanayo gacanta ama iyada oo loo marayo kombuyuutar raadin iswada oo otomaatig ah. Bogagga huruudda ah ee khadka tooska ahi waa nooc ka mid ah buugga ganacsiga, sidoo kale buugga taleefanka ee caadiga ah. Faahfaahinta lagu bixiyay tusaha meheradda waxay ku kala duwan yihiin ganacsiga meheradda. Waxaa ka mid noqon kara magaca ganacsiga, cinwaannada, lambarrada taleefanka, goobta, nooca adeegga ama badeecooyinka uu ganacsigu bixiyo, tirada shaqaalaha, gobolka adeegga iyo ururrada xirfadleyaasha ah. Tilmaamaha qaarkood ayaa ka kooban qayb loogu talagalay faallooyinka isticmaala, faallooyinka, iyo ra'yi-celinta. Tilmaamaha ganacsiga xilliyadii hore waxay qaadan doonaan qaab daabacan laakiin dhawaanahan waxaa loosii kordhiyey websaydhada sababao la xiriira internetka. Tilmaamaha ganacsiga badankood waxay bixiyaan liisas bixinno dheeri ah marka lagu daro xulashooyinka lacagta qaaliga ah. Waxaa jira jihooyin badan oo ganacsi qaarna kuwan waxay u wareegeen internetka oo ka fog qaab daabacan. In kasta oo aysan ahayn matoorada raadinta, tusaha meheradaha badanaa waxay leeyihiin goob goob baarid.